Gorkhali Samaj UK - Welcome to our Samaj's Web Site - page 3
नेपाली नया वर्ष २०७२ सालको सुभकामना !!!
गोरखाली समाज यूके परिवार लगायत जतिपनि देस बिदेसमा रहनु भएका नेपालीहरु प्रति नेपाली नया वर्ष २०७२ सालको सुखत उपलक्ष्यमा सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हर्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।
गोरखाली समाज यूके साथै सम्पूर्ण परिवार
गोरखा समाजले स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने
कतार । कतारवासी गोरखालीहरुको साझा संस्था गोरखा सेवा समाज कतारले गोरखा जिल्लामा २ दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । जिल्लाको पुर्वी उत्तरमा रहेको थुमी गा.वि.स. स्थित आरखेतमा आगामी बैशाख ४ र ५ गते लायन्स क्लव अफ आरुघाट गोरखा संगको सहकार्यमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । गोरखा सेवा समाज कतारका कार्यवाहक अध्यक्ष सुदर्शन भट्टका अनुसार समाजको बार्षिक कार्य योजना अनुसार र केही महिना अघि देखिको आन्तरिक छलफल तथा जिम्मेवारी दिईएका सदस्य साथीहरुको प्रगति प्रतिवेदनलाई मार्च २७ मा बसेको बैठकले छलफल गरि सो शिविर कार्यक्रमको निर्णय गरिएको बताउनु भयो । यस कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्थानिय लायन्स क्लव अफ आरुघाट गोरखाको प्रमुख भूमिका रहने पनि उहॉले बताउनु भयो । संस्थाका सचिव धन बहादुर श्रेष्ठले शिविर कार्यक्रम सञ्चालनको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी संस्थाका केन्द्रिय सदस्य पुरुशोत्तम लामिछानेलाई दिईएको बताउनु भयो । उहॉका अनुसार सो शिविर कार्यक्रमका संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष आश बहादुर गुरुङ र सचिव धनबहादुर श्रेष्ठले उपस्थित जनाउने तथा नेपालमा नै घर विदामा रहनुहुने संस्थाका सदस्यहरुलाई पनि उपस्थिती जनाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै समाज सेवा प्रति धनी मन भएका कतारवासी गोरखालीहरुले गोरखा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्याथीहरु मध्येबाट एक छात्र र एक छात्रा गरि दुई जनालाई बार्षिक रुपमा एक पटक छात्रवृत्ति र सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक साधनहरु मर्मत गर्न वा खरिद गर्न तथा खेलकुदका सामाग्रिहरु खरिद गरी उपलब्ध गराउन हाललाई नेपाली रुपिया पाच लाख रकमको अक्षयकोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । यस कार्यको लागि कतारवासी नेपालीहरु र स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत समाजसेवीहरु, व्यवसायीहरु संघ संस्थाहरु संग सहयोग बारे औपचारिक कुराकानी गरिने पनि जनाएको छ । बुधबल गुरुङ – See more at: http://www.nepalbritain.com/?p=28111#sthash.FnZN6Vwm.dpuf
– See more at: http://wenepali.com/2015/03/7464.html#sthash.HWnfUiel.dpuf
गोरखाली समाज यूके को बार्षिक मिटिंग समन्धी जानकारी !!!
Gorkhali Samaj UK Annual AGM
Samuel Cody Sport College
Ballantyne Road ,Farnborough ,Hampshire, GU14 8SN
11 April 2015 ( Saturday) 1145 hrs.
सम्पूर्ण कार्यसमतिका सदस्यहरु, सल्लाहाकारहरु, आजिबन सदस्यहरु, साथै गोरखाली समाज यूके परिवार मा नमस्कार
बिषय: गोरखाली समाज यूके को बार्षिक मिटिंग समन्धी जानकारी !!!
हाम्रो समाजको बार्षिक मिटिंग यहि आउने ११ अप्रिल २०१५ का दिन Samuel Cody Sport College
Ballantyne Road ,Farnborough ,Hampshire, GU14 8SN मा बिहानको ठिक ११४५ बजे बाट हुने भएकोले उपस्थितिको लागि कार्यसमतिका सदस्यहरु, सल्लाहाकारहरु, आजिबन सदस्यहरु, साथै गोरखाली समाज यूके परिवारलाइ हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
उक्त दिनमा केकस्ता कुराहरुमा छलफल हुने बिसयमा समाजका सचिब अशोक ढकाल को इमेल बाट आबगत पाई सक्नुभयो होला यदि पढि नसक्नु भएको छ भने समाजको वेब : www.gorkhalisamaj.co.uk मा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ ।
यदि तपाई हरुको सदस्यता नबिकरण गर्नु परेको छ या नया सदस्यता बन्नु चाहना गर्नु भएको छ साथै आजिबन सदस्यता लिनु हुन्छ भने तलको ठेगानामा समाजका कोषाध्यक्ष भिम प्रसाद तामांग सग सम्पर्ग गरि बन्न सक्नु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
If you send Cheque by post Treasure Address as follow:
Bhim Prasad Tamang
37 Churchill Crescent
उक्त बार्षिक मिटिंगको दिन पुर्ब घोसित एजेन्डा (कार्यसमेति मिटिंग १४ फेब्रुवरी २०१५ वेब साहिडमा हेर्न सक्नुहुनेछ ) माथि छलफल गरिने र यदि हामीले राखेका एजेन्डा बाहेक समाजलाई रचनात्मक हुने छन् भने यहि मार्च महिनाको अन्तिम दिन सम्ममा पठाउनुहोला हामी योग्य भएमा समाबेस गर्नेछौ ।
साथै उक्त दिनको मिटिंगमा कार्यसमतिका सदस्यहरु, सल्लाहाकारहरु, आजिबन सदस्यहरु, साथै गोरखाली समाज यूके परिवारका साधारण सदस्यहरु लाइ समाजको बारेमा केहि जानकारी गराउने उदेस्य बोल्न चाहनु हुन्छ भने यहि मार्च महिनाको अन्तिम दिन सम्ममा यसै इमेल बाट जानकार गराऊनु होला हामी हाम्रो एजेन्डा मा समाबेस गर्ने छौ ।
समाजको वेब साहिड: www.gorkhalisamaj.co.uk हामीले समयानुकुल नया पुराना लेख समाबेस गर्दै गएका छौ हेर्दै गर्नुहोला ।
यो बार्षिक मिटिग भएको हुनाले समाजको एक बर्समा भएका गतिबिधिहरु समाज लाइ जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले समपूर्ण जिल्ला बासीलाई उक्त दिन उपस्थिको लागि हार्दिक बिनम्र अनुरोध गर्दछु । “जय गोरखाली समाज यूके”
Web site: www.gorkhalisamaj.co.uk
पहिलो पटक लिगलिग कोटमा प्याराग्लाइडिङ उड्दा…..
आदर्श नेपाल संवाददाता
विनोद लामिछाने दौडमा जो पहिलो भयो त्यहि व्यक्ति वर्षदिन सम्म राजा हुने पराम्पराबाट विकास भएको गोरखाको लिगलिगकोटबाट पहिलोपटक प्याराग्लाइडिङ्ग उडेको छ । प्याराग्लाइडिङ्ग पाइलटहरु अर्जुन बराल, निसिम थापा, सुनिल भट्टराई र अन्य तीन विदेशी पाइलटहरुले लिगलिग कोटबाट उडान गरेका हुन् । झण्डै २० मिनेट गोर्खाको आकाशमा उड्दै उनीहरुले ठाँटिपोखरी बजारमा अवतरण गरेका थिए । बृहत् गोरखा राज्यको निर्माण अभियानको प्रारम्भ लिगलिगबाटै भएको थियो । द्रव्य शाह महत्वाकांक्षी एवं लडाकु राजा थिए । द्रव्य शाहको उदयपूर्व लिगलिगमा मगरहरुको एकतन्त्रीय शासन थियो । प्रत्येक वर्ष दौड प्रतियोगिताबाट प्रथम हुनेलाई वर्ष दिनका निम्ति राजाको रुप छनौट गर्ने प्रचलन थियो । दौड विजयबाट राजा घोषित हुने यो परम्परा शासक छनौटको सन्दर्भमा विश्वमा नै अनौठो र अद्वितीय मान्न सकिन्छ । सोहि ठाउँमा पहिलोपटक आफ्नों आकाशमा विशाल चराजस्तै उड्दै आएको अनौठो वस्तु देखेपछि त्यसलाई हेर्न स्थानियहरुको भिड लागेको थियो । प्याराग्लाइडिङ्गमा उड्दै त्यस ठाउँमा उत्रिएका पाइलटहरुलाई पञ्चेबाजा, अबिर र फुलमालाले स्वागत गरियो । उडानको चाँजोपाँचो पोखरा प्याराग्लाइडिङ्ग कम्पनीले मिलाएको थियो । स्थानिय व्यवस्थापक प्रकाश थापाले सो खेलबाट त्यस क्षेत्रमा शाहसिक पर्यटन विकासको सम्भावना रहेको औल्याए । विश्वकै प्रख्यात मनाङ्गको थोरङपास प्रवेश मार्गको रुपमा रहेको डुम्रे–बेसिशहरको मध्यभागमा रहेको तुरतुरे बजारबाट नजिकै रहेको ठाँटिपोखरीबाटै लिगलिगकोट पुगिन्छ ।
फरक ठाउँमा आएर प्याराग्लाइडिङ्ग उडाउँदा फरक अनुभुति भएको पाइलट अर्जुन बरालले बताए । स्थानियहरुको मुहारमा देखिएको खुसिले आफुलाई पनि हर्षित तुल्याएको उनले सुनाए । कहिल्यै प्याराग्लाइडिङ्ग नगरिएको ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ्ग गर्नु शाहसिक कार्य भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘कहिल्यै कोहि नउडेको ठाउँमा पहिलो पटक उड्दा ज्यानकै बाजी लगाएर उड्नु पर्दछ’ बरालले भने । सफल उडान पनि भने सो ठाउँपनि प्याराग्लाइडिङ्गका लागि अनुकुल रहेको प्रतिक्रिया दिए । गोरखा सदरमुकामबाट पश्चिममा ४ र ५ घण्टाको पैदल यात्राबाट पुग्न सकिने लिगलिगकोट ऐतिहासिक पर्यटकिय स्थलका रुपमा रहेको र सो दरवारको भग्नावशेष यद्यपी त्यहाँ विद्यमान छ । लिगलिग कोटमा अहिलेपनि वर्षेनी दौड प्रतियोगिताहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । – See more at: http://aadarshanepal.com/archives/16076#sthash.Ew2jIahy.dpuf
हिउँले किचिएको बार्पाक!
गोर्खा जिल्लाको उत्तरपूर्वको हिमाली भेगमा पर्ने बार्पाक गाउँमा जाने सौभाग्य मैले आफैँले रोजेर पाएको होइन, तर त्यो गाउँको झझल्को मलाई कहिल्यै नमेटिने गरी आइरहन्छ । दरौँदी नदीको गड्तिरै गड्तिर धेरै समय लगाएर सम्म बाटो हिडेको, साँझ झमक्क परे पछि रोमन भी आकारको छिपछिपे बाटामा हिड्दा अजल्टिएर देब्रे हातले सिस्नो समाउन पुगेको, रैथानेहरूले एक-डेढ घण्टामा काट्ने उकालो पाँच घण्टा लगाएर काटेको, बार्पाक जाँदाको उकालो र फर्किँदाको ओरालामा बेग्ला बेग्लै किसिमले खुट्टामा कैँडा लागेको, झ्याल-ढोका नभएको बुइकलमा वास बसेको, हिमाली क्षेत्रका मान्छेलाई त हिउँ पनि किसिम किसिमको हुँदो रहेछ भन्ने चाल पाएको, घलेहरूको भाषालाई गुरुङहरूले घले नाम राख्न छेकेको, नेपाली भाषा मात्र जान्ने गुरुहरूलाई घले भाषा नसिकी विद्यार्थीलाई सिकाउन गारो परेको र भिक्टोरिया क्रसमा कीर्तिमान राख्ने जमदार गजे घलेको जन्मथलो पुगेको अनुभव सबै एकै चोटि गुट्मुटिएर आउँछन् बार्पाकको झझल्कासित ।
दुईतीन वर्ष अगाडि ‘राष्ट्रिय भाषाहरू संरक्षण संस्था’ नाम भएको संस्थाका प्रमुख एस के खालिङले मलाई घले भाषाको वर्ण निर्धारण गर्न बार्पाक जाने निम्तो दिए । म उनको साथ लागेँ । जाडो महिनै थियो । भालुस्वारा सम्म हामी बसमा जानु पर्ने थियो, तर सौभाग्यले हामी गएको दिन चाहिँ बस भालुस्वारा भन्दा पर चनौटे सम्म पुग्यो । त्यहाँबाट हामीले पैदल हिँड्नु पर्ने भएकाले बस अलिक पर पुगी दिएकाले हाम्रो बाटो केही छोटियो । चनौटेबाट हामी बालुवा भन्ने ठाउँ सम्म बास बस्न पुग्यौँ ।
बालुवा पुग्ने वेलामा साँझ झमक्क पर्‍यो । साँगुरो अङ्ग्रेजी भी आकारको बाटाबाट भरिया, खालिङजी र म हिँड्दै थियौँ । कुलाको पानी बगेर बाटो छिप्छिपे भएको थियो । वेला वेलामा भारी बोकेका खच्चडका लर्कालाई बाटो छोडी दिनु पर्थ्यो । एक्कासि अजल्टिएर म देब्रे हात भुइँमा टेक्न पुगेँ । अँध्यारो भए पनि हात अल्लो हो कि सिस्नामा परेछ भन्ने बुझ्न ढिलो भएन । सिस्नाले हात भत्भती पोले पछि के गर्ने भन्ने होसै रहेन । केटाकेटीमा सिस्नाले पोलेका वेलामा सिङान लगाउँदा बिसेक गर्छ भन्ने विश्वास थियो । अर्को केही औषधी आफूसित नभएकाले सिस्नाले पोलेका ठाउँमा मैले सिङानै लगाउने निर्णय गरेँ । सिस्नामा फर्मिक एसिड भन्ने अम्ल भएकाले त्यसले पोल्छ भन्ने मैले कतै पढेको थिएँ । कुनै कुनै चिल्ने कमिलाले पनि टोक्ता हाम्रो जिउमा फर्मिक एसिडले भत्भती पोल्छ अरे । कमिलाले चिलेका वेलामा पनि केटाकेटीमा हामी सिङान दल्थ्यौँ । सिङान चिप्लो हुन्छ । जुनसुकै चिप्लो कुरामा अल्काली हुन्छ अरे । यसरी अमिलो र खरानी मिसाए झैँ हुने रहेछ क्यारे सिस्नो वा कमिलाले चिलेका वेलामा सिङान दल्ने उपचारमा । जे भए पनि धरान छोडेर काठमाडौँ आए पछि मैले कमिलाले चिलेको वा सिस्नाले पोलेका वेलामा सिङान दल्ने मौका पाएको थिइन । तर केटाकेटी हुँदा जस्तो सस्तो सिङान अचेल हुँदो रहेनछ स् सिस्नाले पोलेका ठाउँमा मेरा नाकमा पुग्दो सिङानै आएन । केटाकेटी भए के गरिन्थ्यो कोनिस अहिले साथीसित सिङान सापट माग्न सकिन । पर्सि पल्ट सम्म हात झन्झनाई राखेको थियो ।
बालुवामा एउटा घले दम्पत्तिको लजमा बस्यौँ । त्यस लजका एकदुई ओटा चलन मलाई नेपालभरका लजवालाहरूले सिक्नु पर्ला जस्तो लाग्यो । लजमा जुत्ता बाहिरै खोल्नु पर्ने, लजका चप्पल साट्नु पर्ने र धारामा गोडा धुनु पर्ने चलन रहेछ। लजका सिरक सुकिला राखिएका रहेछन् । लज सञ्चालकहरूले यति कुरो नजान्नाले बाटो हिँड्दा धेरै पल्ट म अघिल्ला बटुवाका मोजा गनाउने सिरक ओढ्न बाध्य भएको छु ।
भोलि पल्ट हामी बार्पाक जाने नाक ठोक्किने ठाडो उकालो चढ्न थाल्यौँ । बाटो हिँड्दा भरियालाई हामी भेट्ता रहेनछौँ । सोलुखुम्बुमा जन्मेका खालिङजीलाई न बाटो हिँड्ने समस्या थियो, न उकालो चढ्ने । म चाहिँ धरान विजयपुरमा जन्मेको हुनाले र अलिकति बूढो पनि भएकाले होला भरियालाई भेट्न खालिङजी नसक्ने, खालिङजीलाई भेट्न म नसक्ने भए जस्तो मलाई लागी रहेको थियो । वास्तवमा खालिङजी मलाई साथ दिन विस्तारै हिँडी रहेका थिए ।
जुनसुकै उकालो चढ्दा मलाई सुरुमा चाहिँ धरान सिंहदेवी वा तीनधारेको उकालाको सम्झना आउँछ, तर बार्पाकको उकालो त बार्पाककै उकालो जस्तो थियो । म पन्ध्र वर्षको उमेरमा दाजुको बिहेमा ताप्लेजुङको सिमा भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ। तेरथुम जाँदा तमोर खोलो तरे पछि झन्डै म्याङ्लुङ सम्मको ठाडो उकालो सती बयर फाँक्तै काटेको र टाकुरामा पुग्दा पानी नहालेको मोही खाएको बिर्सन सकिँदैन । खोटाङमा आफ्नै ससुराली जाँदा दूध कोसी र सावा खोलो वारिपारिको उकालो चढेको अनुभव जोड्दा पनि मेरो जीवनमा बार्पाकका उकालाको ठाडो पनलाई केहीले पनि उछिन्न सक्तैन ।
बार्पाकको भन्दा बेग्लै किसिमको ठाडो उकालो चढ्दाको अद्वितीय अनुभव मेरा जीवनमा मैले गुजरातमा गिर्नारको उकालो चढ्दा गरेको छु । गिर्नारमा दश हजार ओटा जति सिँढी चढ्दा र ओर्लिँदा खुट्टामा बेग्लाबेग्लै किसिमका कैँडा लागेर फत्र्याकफत्र्याक मैले बार्पाकको उकालोओरालो गर्दा पनि सम्झेँ ।
बार्पाकमा घाम लागेका वेलामा गुलियो न्यानो भयोस साँझबिहान र बादल लागेका वेलामा गुलियो शीतल भयोस राति मीठो जाडो भयोस पानी परेका वेलामा सिरक र आगो नछोडुँ जस्तो भयोस हिउँ परेका वेलामा बाहिर निस्कुँ जस्तो भयो । झरीमा त्यति हिँडिएनस हिउँमा भने, डुलियोस हिउँ पग्लेर हिलो भएको बाटामा पनि अलिअलि हिँडियो । हिउँमा खुट्टा भासिँदा रमाइलो लाग्छ, तर छिटो हिँड्न सकिँदैन। म चीनमा हुँदा हिउँ परेका वेलामा सडकका पेटीमा हरेक पाइलामा जुत्ता रडकरडक भएको पनि र एकदिन त हिउँमै चिप्लेर लडेका वेलामा अरूले देखे कि भनेर पल्याकपुलुक हेरेको पनि बिर्सिन्न । बार्पाकमा पुगेका वेलामा चाहिँ हिउँ पनि किसिमकिसिमको हुँदो रहेछ भन्ने पहिलो पल्ट चाल पाएँ ।
भोलि पल्ट र पर्सि पल्ट गरेर घले भाषाको वर्ण माला बनाएँ । केलाएर हेर्दा घले भाषा तिब्बती भाषासित नजिकैको अनि तामाङ, गुरुङ, थकाली, मनाङे र छन्त्यालसित टाढाको साइनो लाग्ने भोटबर्मेली भाषा रहेछ । एउटै शब्दमा लागेको स्वरलाई रुद्र घण्टी तलमाथि सारेर उच्चारण गर्दा बेग्लाबेग्लै शब्द बन्ने भाषालाई तानल भाषा भन्दछन् । घले भाषा पनि तामाङ, गुरुङ, थकाली, मनाङे र काइके झैँ तानल भाषा रहेछ । त्यसमा कुनै कुनै ध्वनि त अचम्म लाग्ने रहेछन् ।
घले भाषा भन्दा पनि घले भाषाको सामाजिक समस्या भने डरलाग्दो रहेछ १ घले भाषा गोर्खा जिल्लाका बार्पाक, लाप्राक, गुम्दा, उइया, खोर्ला र इसिनाम भन्ने उत्तरपूर्वी भेगका गाउँहरूमा बोलिने रहेछ । गाउँकी एउटी स्कुल शिक्षकसित कुरा गर्दा के थाह भयो भने, नेपालीमा पढाएको केटाकेटी बुझ्दैनन् अरे अनि गुरुलाई पनि घले भाषा आएन भने, गुरुचेलामा संवादै हुँदैन अरे १
रमाइलो कुरो के रहेछ भने, गाउँका कामीदमाईँ पनि घले भाषा फरर्र बोल्दा रहेछन् । घले भाषा मातृभाषा हुनेमा घलेहरू भन्दा गुरुङहरू बढ्ता रहेछन् । त्यहाँका गुरुङले जानेको भाषै त्यही हो, त्यसैले त्यहाँका गुरुङले त्यो भाषालाई ‘घले भाषा� भन्ने नाउँ राख्नै दिँदा रहेनछन् । मैले लम्जुङ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीको सिक्लेसका गुरुङहरूसित अन्तरक्रिया गरेर गुरुङ भाषाको वर्ण माला बनाइदिएको छु अनि गुरुङ भाषाका व्याकरणको रूपरेखा पनि तयार गरी दिएको छु । बार्पाकको घले भाषा अरू तिरको गुरुङ भाषा होइन र त्यो गुरुङ भाषाको भाषिका पनि नभएर छुट्टै भाषा हो । त्यो भेग बाहेक लम्जुङ जस्ता अरू तिरका घलेहरू पनि घले भाषा नबोलेर बोल्न जाने, गुरुङ भाषै बोल्छन् । यी परिबन्दले बार्पाकका घलेहरूलाई आफ्नो अस्मिता र चिनारी स्थापित गर्न सारै गारो परेको रहेछ ।
नचिनिने गरी हिउँले पूरै बार्पाक छोपिएको थियो । फुर्कामा हिउँ परेको भारी थाम्न नसकेर बाँस झ्याङमा बाँसका घनाहरू पडकपडक फुटी रहेका थिएस रुखका हाँगाहरू पडकपडक भाँचिएर खसी रहेका थिए । मलाई बार्पाकमा घले र घले भाषाको अस्मिता हिउँको भारी खप्न नसकेर पडक्क फुट्न आँटेको बाँस र रुखको फुर्को जस्तो लागी रहेको छ ।
वारपाक र सेभेन सिस्टर
गोरखा जिल्लाकै संभवत सुन्दर र पर्यटकीय गाउँ मानिएको वारपाक नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ को तयारीको लागी जुटन थालेको छ र त्यसको पुरै तयारीको लागी सेभेन सिस्टरको समूह भनेर चिन्न सकिने दल कुमारी घले सहितको टोलीको ठुलो हात छ ।
इतिहासले घले राज्यको उपमा पएको यो गाउँलाई गजे घलेको नामवाट पनि चिन्न सकिन्छ । दोस्रो विश्व युद्वमा वहादुर प्रर्दशन गरेको भन्दै वि्रटीस सरकार वाट भिक्टोरीया क्रस पाउने गजे त अहिले छैनन तर पनि यो गाउँलाई गजे घलेको गाउँ भन्दा कसैको दुई मत नरहला ।
सामान्यतया तपाइ घुम्न जान मन लागेका कस्तो ठाउँको कल्पना गनु हुन्छ ? सफा, सुन्दर र मिलन सार मानिस भएको स्थान । जहाँ जाँदा स्वर्गीय आनन्द आवास । अग्लो भिरमा वसेर चारै चिर हिमाल देख्न पाइयोस । हो यस्तै यस्तै कल्पना गर्नेहरुका लागी घरर्तीकै स्वग हो भन्दा हुन्छ वारपाक ।
गोरखा सदरमुकाम देखी उत्तरमा रहेको यो गाउँमा घले, गुरुङ्ग र परियार जातीको विशेष वसोवास रहेको छ । वडा नम्वर ४, ५, ६, ७, ८ र ९ गरी छ वटा वडा मिलेर वनेको गाउँ नै वारपाक गाउँ हो । पहिले पहिले गोरखा वजार देखी हिडेर जानुपर्ने यो गाउँमा केही साता अगाडी देखी हलुका सवारी साधन समेत चल्न थाले पछि यहाा घुम्म जानेहरुको भिड नै लागेको छ ।
वारपाकको सुन्दरताको वर्णन सायदै कसैले गर्न सक्ला । पंक्तिकार पनि ३३ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक ०६६ साल फागुन १० गते वारपाक पुग्दा र गाउँलाई नजिकै वाट नियालेर हेर्दा अचम्मैमा परेको थियो । के यती विकट ठाउँमा पनि यति ब्यवस्थीत गाउँ हुन सक्छ ? के यस्ता मिलनसार मानिस गाउँमा हुन सक्छ ? यस्तै यस्तै कुराले भिजेको दिमागलाई दुई दिने वसाइमा त्यहाँका मानिसले मनै पग्लने गरी स्वागत विदाई गरे पछि कल्पना भन्दा वाहिरको गाउँ रहेछ वारपाक भन्ने लागेको हो ।
यही गाउँमा हुर्की वढेकी हुन दल कुमारी घले । यी नै हुन वारपाक गाउँलाई नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ को तयारीको लागी दिन दुई गुणा र रात चार गुणा काम गरी रहेका छन । उनले यही गाउँलाई चिनाउनका लागी केही महिना अगाडी मात्र वारपाक र वरपर रहेको पर्यटकीय स्थलको डकुमेन्ट्री समेत निर्माण गरी सकेकी छिन । उत्त कार्यका लागी नेपाल पर्यटन वोड पोखराले पनि सहयोग गरेको थियो ।
अहिले उनी वारपाकमा नै वसेर कसरी आˆना गाउँका दाजुभाई तथा दिदीवहिनीहरुलाई विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक गाउँमा भित्र्याउदा के फाइदा हुन्छ भनेर दैनिक भलाकुसारी गर्ने गर्छीन भने अन्य वहिनीहरु काठमाण्डौंमा वसेर वारपाककी आमाहरुलाई पौढ कक्षा संञ्चालन गर्दै छन । पुष्पा, भिमकुमारी, खेमकुमारी, आशा, पुणर्ीमा र दिल कुमारी जस्ता उनका होनाहार वहिनीहरुले उनका यो कार्यलाई सहयोग गरी रहेको छ ।
दल कुमारीकै प्रयासमा अहिले वारपाकमा होम स्टे अर्थात पाहुना घरको अवधारणा अनुसार २० घर भन्दा वढी घरमा एक देखी दुइ वटा कोठा छुट्टाइएको छ भने त्यसमा चाहिने सामानको तयारी समेत भै रहेको छ । अन्य घरहरुमा पनि यस्तै काम गर्ने तयारी उनको भै रहेको छ । `धेरैले कुरा वुझदैनन । सम्झाउदैमा दिन जान्छ` दल कुमारी घलेको गुनासो छ । हामीले वारपाक सम्वन्धी व्रोसर समेत तयार गरी सकेका छौ घलेले भनिन ।
वारपाक गाउँमा ८ सय भन्दा वढी घर भएको अनुमान गरीएको छ । एक घर देखी अर्को घर सम्म जाने सवै वाटो, आँगन र पर्खाल सफा, सुन्दर र ढुङ्गाले विच्छाएर सफा राखीएको छ । के बालक के वृद्वा सवैले सरसफाइमा दैनिक समय दिने गरेकै कारण यो गाउँ नेपालकै सुन्दर र सफा गाउँ हो भन्दा गलत हुने छैन ।
प्रत्येक घरमा दुई जना पर्यटक राख्ने तयारीको साथ योजना तयार गरेकी घलेका अनुसार विदेशी पर्यटक भने वर्षेनी भाद्र देखी कार्त्तिक सम्म मात्र आउने भएकाले अन्य समयमा स्वदेशी पर्यटकलाई आउने वातावरण तयारी जुटेको वताइन । वारपाक गाउँ वाट देखीने ठुलै हिम श्रृखला यसको मुख्य आकर्षक केन्द्र हो भने ठुलो वस्ती र जातिय विभेष विना नै भाइचारा सम्वन्धमा सवैको जातीको वसोवास हुनु अर्को महत्वको विषय हो ।
यो गाउँ वाट धार्चेको लेक, मनास्लु, घ्याच्चोक, नारदपोखरी का साथै मनाङ्ग हुदै लम्जुङ्गको सदरमुकाम वेशिसहर जान सकिन्छ भने गोरखा सदरमुकाममा नै आउनको लागी लाप्राक, गुम्दा, आरुआरवाङ्ग हुदै आरुघाट वजार भएर धादिङ्ग वा गोरखा सदरमुकाम समेत आउन सकिने भएको कारण पनि यसले पर्यटकीय सम्भावना धेरै वोकेको छ ।
२०११ मा ठुलै पर्यटक भित्राउने तयारीमा रहेकी घलेले विभिन्न खालको तालिमको ब्यवस्था गरेकी छिन स्थानिय गाउँलेलाई । ग्रामिण पर्यटनका लागी हो । पााच तारे होटलको जस्तो सुविधा दिन सकिदैन तर पनि हामी कुनै पनि पर्यटकलाइ निरास वनाएर पठाउदैनौ दल कुमारी घलेको दावी थियो । पर्यटककालागी स्थानिय खाना, भेषभूषा र संस्कृतिको विषयमा जानकारी दिने तथा स्थानिय संस्कृतिमा प्रख्याती कमाएको मारुनी, चट्का र रोधी तथा घाटु नाँच देखाइने तयारी पुरा भै सकेको छ ।
यही कार्यका लागी उनले अहिले स्थानिय र वाहिरी संघ संस्थाको सहयोग लिने प्रयास गरी रहेकी छिन । हामीले उनलाई वारपाकमानै भेटदा पनि उनी यही कार्यमा ब्यस्त्त भएको देख्न पाइयो । सायद उनी संग समय नभएर होला उनलाई भेटन हामीले गरेको प्रयास रात ९ वजे मात्र सफल भएको थियो । उनले त्यती धेरै समय गाउँमा खर्चदा समेत नेपाल टुरीजम वोर्ड भनेको कुन पार्टीको हो भनेर स्थानिय गाउँलेले सोध्दा भने समय खर्चेकोमा कहिले कााही दुख लाग्ने गरेको समेत दुखेसो पोखीन ।
उनको मनमा दुखका धेरै पोकाहरु छन तर पनि खोलेर केही हुदैन थाहा छ । नचाहदा नचाहदै पनि उनलाई जाती र पार्टीका कुरा लिएर ज्यान जान सक्ने सम्मको धम्की खपी सकेकी छिन । घले राजाका पाला देखी वोल्दै आएको भाषाका विषयमा केही समय अगाडी देखी विवाद आएको कारण उनलाई यस्तो धम्की आएको हो । घले र गुरुङ्ग जातीको वाहुल्यता रहेको यो गाउँमा घले राजाका पाला देखी वोल्दै आएको भाषाका विषयका घले गुरुङ्ग समुदाय विच विवाद उत्पन्न हुन थाले पछि जो कोही पनि यसको विषयमा खुलेर वोल्न चाहदैनन ।
राडी, पाखी, वाँसको काइयो र ढाकाको कपडामा वारपाकको चिनो भनेर पर्यटकलाई दिने तयारीका साथ केही सातामा नै तालिम चलाउने तयारी पनि पुरा गरेकी छिन दल कुमारीले । ढाकाको कपडा आˆनो समाज र जातीको पहिचान नभएता पनि विश्व स्तरमा नै पहिचान वनाइ सकेको ढाका कपडामा वारपाक भनेर लेखेर दिन सकियोभने त्यसले पनि छुट्टै चर्चा पाउनेमा उनको दाउ रहेको छ ।
चलन चल्तीमा वारपाकमा रहेकी रोशनी आमा र सेभेन सिस्टरको समूहले गाउँमा प्रवेश गर्ने र गाउँ वाट जानेलाई स्वागत र विदाई दुवै गर्ने गर्दै आएको छ । ठुलै सम्मानका साथ स्वागत र विदाई गर्ने यो चलनले जो कसैलाइ पनि एक पटक फेरी वारपाक जाने इच्छा जागृत हुने निश्चित छ । गाउँमा प्रवेश गर्ने जो कोही पुरुषलाई रोशनी आमाले छोराको उपनामले वोलाउने गर्दछ भने सवै संग आत्मीय सम्वन्ध पनि राख्ने गर्दछीन ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ मा वारपाकमा ठुलै आन्तरीक तथा वाहृ्य पर्यटक जाउन । शुभ कामना वारपाक लाई र अनि रोशनी आमा र दल कुमारी घलेलाई उनको कार्यको लागी सलाम जस्ले वारपाकको चिनाउनका लागी ठुलै योगदान गर्दै छ ।
गोरखाको छेकम्पार-५, बुर्जी गाउँकी फुन्जो लामालाई समाजमा छोरीको पुरुषार्थ देखाउने ठूलो रहर छ। त्यसैले उनी दुर्घटनामा परेकालाई हेलिकोप्टरमा झुन्डिएर उद्धार गर्ने काम सिक्न थालेकी छन्। ‘हेलिकोप्टरमा झुन्डिएर आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालको आकाशमुनि पुग्दा पनि मनमा कत्ति डर लाग्दैन। बरु अवसर पाए छोरीले पनि साहसी काम गर्न सक्छन् भन्ने सोचिरहेकी हुन्छु’, फुन्जो भन्छिन्।
– See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/4412#sthash.h4HZrMfz.gHXYsCbD.dpuf